Ihe ndi ozo - International Association Centers Association
Agụ maka Ikpe Ziri Ezi
Akwụkwọ edemede akọwapụtara site na IWCA SIG na Antiracism Activism (2014)
Agụ-maka-agbụrụ-ikpe-ikpe-IWCA-SIG-Antiracism-Annotated-Bibliography-2014Budata site na ntaneetị
Ide ederede Journals
Akwụkwọ Ederede Center: IWCA akwụkwọ akụkọ. Denye aha na Ọnụ ndị otu.
Nyocha Ọgbọ: Na ntanetị, akwụkwọ akụkọ IWCA mepere emepe.
Ebe akwukwo akwukwo ndi ozo, nyocha, Bibliographies
IWCA Onyinye-Mmeri Isiokwu na Akwụkwọ
Na-aga n'ihu na-edegharị akwụkwọ ọgụgụ nke akwụkwọ Center Center
The Projectlọ Ọrụ Na-ede Akwụkwọ Nnyocha, nke sitere na Mahadum Louisville na 2000 ma kwaga na Mahadum nke Arkansas Little Rock ọtụtụ afọ mgbe e mesịrị, na-achọ ide akwụkwọ akụkọ ihe mere eme nke ebe ederede na United States na mba ụwa. Ihe omume a gunyere otutu akuko banyere ndi n’aru ebe ede ederede, ihe ederede banyere ihe ndi metutara ederede, ya na ihe nlere anya nke ihe omuma banyere iduzi ya na iru oru. Ebe a. Kpọtụrụ Allison Holland maka ozi gbasara WCRP ma ọ bụ Harry Denny banyere Nyocha WCRP.
Ndepụta WCENTER: WCENTER bụ ndepụta nzipu ozi maka ndị ọdee akwụkwọ Center na gburugburu ụwa. Iji denye aha na WCENTER, kpọtụrụ Elizabeth Bowen elizabeth.bowen@ttu.edu. Iji lelee ebe ochie, ị nwere ike ịga http://lyris.ttu.edu/read/?forum=wcenter. Ọ bụrụ n’ịchọrọ izipu ozi na listi ahụ, zaa ozi email gị dabara nke ọma: wcenter@lyris.ttu.edu. Biko rụba ama: WCENTER abụghị nzukọ gọọmentị nke IWCA. IWCA anaghị edozi ya ma ọ bụ chịkwaa sava ahụ ọ bi.
SSWC ndepụta: SSWC bụ ndepụta nzipu ozi maka nke abụọ ndị isi ụlọ ọrụ na-ede edemede ụlọ akwụkwọ. Idenye aha na SSWC-L zipu email na LISSERV@LISTS.PSU.EDU na “Denye aha SSWC-L aha gị" n'ime ozi a.
Ijikọ na mmemme
IWCA Aka Collaborative @ CCCCs
Mgbakwunye Ihe Omume
Nzukọ mba na nkuzi ndị ọgbọ na ederede (NCPTW)
Ide ihe nchịkwa ọchịchị